भारतीय नक्सा विवादबारे बहस : सरकारको ‘लुते’ विज्ञप्तीले राष्ट्रियता बाँच्दैन् - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भारतीय नक्सा विवादबारे बहस : सरकारको ‘लुते’ विज्ञप्तीले राष्ट्रियता बाँच्दैन् - www.khabardabali.com
भारतीय नक्सा विवादबारे बहस : सरकारको ‘लुते’ विज्ञप्तीले राष्ट्रियता बाँच्दैन्
कात्तिक २२ गते, २०७६ - १३:३०
काठमाडौं । नेपालको भूमी लिम्पुयाधुरा, कालापानी र लीपूलेक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा गाभिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सुगौली–सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सीमाना काली नदी भनिएता पनि भारतीय पक्षले विभिन्न बखेडा निकाली नेपालको भूमी फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, विभिन्न समयमा जारी भएको नक्सा, तत्कालिन अधिकारीहरुले एकआपसमा गरेको पत्रचारको आधारमा काली नदीको उद्गमस्थान लिम्पुयाधुरा रहेको प्रष्ट छ । नेपाल सरकारले यहि ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकोले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा अमान्य हुने बताइसकेको छ । तर, भारत सरकारले गत शनिवार जारी गरेको नक्सा पुरानै भएकोले नेपालको भूमि नचलाइएको झुटो अफाह फैलाइरहेको छ ।
सन् १९६२ मा चीन र भारतबीचको युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौजले सामरिक रणनीति र सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त ठाउँको खोजीमा कालापानी र लीपूलेकको बीचमा रहेको घाँटी भेटाएपछि सो ठाउँलाई कब्जा गरेर बसेको देखिन्छ ।
लीपूलेकलाई आधार मानि ०७२ जेठ १ मा चीन र भारतबीच दुईदेशीय सम्झौतासमेत भएको छ । व्यापार विस्तारको नाममा भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा चीन र भारतबीच व्यापार विस्तार गर्न लीपूलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । नेपालको भूमी लीपूलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने चीन र भारतबीच सम्झौता हुँदै गर्दा नेपाललाई भने पूर्ण वेवास्ता गरिएको थियो । सो सम्झौतालाई लिएर नेपालले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार ६० हजार हेक्टरभन्दा बढि नेपाली भूमी भारतले अधिक्रमण गरेको छ । सुस्ता, लिम्पुयाधुरा, कालापानी, लीपू, खुर्दलुटजस्ता धेरै सीमा समस्या नेपालले बर्षौदेखि झेल्दैआएको छ । सीमा समस्यालाई समयमै राज्यसंयन्त्रमार्फत कुटनैतिक पहल गरिनु पथ्र्यो । तर, भारतीय पक्षको हेपाह प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको फितलो कुटनीतिक संयन्त्रका कारण दुईदेशबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेको छ । सीमा विवाद समाधानको लागि दुईदेशबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको भएपनि सुस्ता र कालापानीको विषयमा सहमति अड्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारीले जनाएका छन् ।
खासमा बर्षौंदेखिको नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या सुल्झिन नसक्नुको मुख्य दोषी को हो ? नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षको स्वार्थ के छ ? विशाल भूमी भएको उदयमान शक्तिराष्ट्र भारतलाई नेपालको भूमी अधिक्रमण गरेर के फाइदा छ ? यसै विषयमा नेकापा नेता देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ र साझा पार्टीका नेता डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग खबर डबलीकोतर्फबाट गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेको सम्पादीत अंश :
कात्तिक २२ गते, २०७६ - १३:३० मा प्रकाशित